Mamadika ny iPad ho typewriter miaraka amin'ny iTypewriter | Vaovao IPhone
Manova ny iPad ho lasa typewriter miaraka amin'ny iTypewriter
Ny mpamorona indostrialy Austin Yang dia namorona kojakoja mahaliana ho an'ny iPad mamela izany avadiho ny takelaka Apple ho lasa milina fanoratana, ka manangona singa teknolojia roa avy amin'ny fotoana tena samihafa.
iTypewriter, Izay no iantsoana ilay zavatra noforonina, ahafahantsika manoratra antontan-taratasy avy amin'ny kitendry fitendry. Ho an'ny zavatra hiasa, ny kasety ampiasain'ny mpanao milina fanoratana taloha dia nosoloina singa capacitive izay mihetsika amin'ny efijery iPad ary manoratra ny toetrany mifanentana aminy rehefa manindry lakile iray isika.
Miaraka amin'ity rafitra ity, maka iPad kely vitsivitsy ny hitsiny amin'ny efijery noho izany, amin'ny fotoana maharitra, ny fampiasana hatrany ny iTypewriter dia mety hisy vokany. Noho io antony io indrindra no antenainay fa hampiasa izany fotsiny i Austin Yang ho fanohanana ary tsy dia fahita amin'ny milina fanoratana.
Fanazavana fanampiny - Logitech K760, fitendry keyboard tonga lafatra ho an'ny iPad
Loharano - RedmondPie
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Manova ny iPad ho lasa typewriter miaraka amin'ny iTypewriter
konigche dia hoy izy:
Fa inona ry Rahalahy, manomboka amin'ny tontolon'ny Youtube miaraka amina gameplays manokana ho an'ny fitaovana iOS aho. Manantena aho fa hitsidika ny fantsoko aho ary raha tianao ny ataoko dia misorata anarana.
Manantena aho fa tsy hanao spam. Miarahaba.
Mamaly an'i konigche
Ddaro17 dia hoy izy:
…… .telo taona aty aoriana,
Tamim-pahatsorana, izany ary
hadalana re izany !!!
Valio amin'i Ddaro17
Tsy ao anaty drafiko ny hamely mafy ny ipad 😀
BiteSMS 6.3: fiasa vaovao sy vidiny antsasaky ny fotoana voafetra (Cydia)
Nandalo an'i Safari i Google ary mamela anao hanokatra rohy ao amin'ny Chrome ho an'ny iOS